Akwande isithembu kunciphe imijendevu | News24
LAST UPDATED: 2018-10-17, 18:58
Akwande isithembu kunciphe imijendevu
UNtombizenele Mtshali uncoma isithembu.
UMA kungase kubuyelwe emuva kuvame kabusha umkhuba wokuthatha isithembu, ingancipha imijendevu egcwele izwe kunciphe nemilanjwana ekhulela komalume. Sekukaningana izibalo zikhomba ukuthi sikhulu isibalo sabesifazane abakhona emhlabeni uma kuqhathaniswa nabesilisa.
Lokhu kusho ukuthi uma kungathiwa indoda nendoda ayibe nomfazi ngamunye, baningi abesifazane abangasala bengaganile. Isimo esibuhlungu kakhulu ukuthi basuke besala nje bayalalwa futhi bayazaliswa kodwa bashiywa kunjalo. Ukuba nenhliziyo embi nokungakhuli yikona okuvama ukuvimba abaningi ekuthatheni isithembu.
Uma kungachuma umqondo wokuvusa imindeni, kunakekelwe nangendlela izingane zingashiywa emakhaya nogogo no-anti, singaqala phansi sivuke kabusha isithembu kwakhiwe isizwe.
Abaningi bala isithembu ngoba bebuswa wukuthi lona ozogana kabusha uzama ukuthatha indoda, abanye bathi yisidala futhi angeke bakwazi nokucabanga izinto abenziwa zona yindoda seziphinda zenziwa komunye abamaziyo. Abanye onhliziyombi bancamela ukuthi uma bezwile ukuthi indoda iqonyiwe yamithisa, bathi akulandwe ingane bazoyikhulisa bona kodwa abamfuni nala ehambe khona unina wengane. Owani lo mona wokuthi ufune ukuthi ezakho izingane uzikhulisele wena kuthi omunye wesifazane umphuce ilungelo lokuzikhulisela eyakhe ingane? Umuntu wesifazane upheleliswa ngokubizwa ngendoda ethile. Uma engakabi nendoda, noma ungahamba uphushe izinqa nesifuba, upende umlomo nezinzipho, ushayele ebelethe isondo emhlane, intokozo yakho isuke ingakapheleli.Umuntu wesifazane ongena ndoda usuke engakabi umuntu ngokugcwele.
Yingakho uke uzwe amakhosikazi uma exoxa, uthole umuntu ethi “Ngiyabonga kuShuku ngokungenza umuntu”. Usho kanjena nje yingoba usuke esebonile ukuthi ubengaphelele kwaze kwaba kufika uShuku, wamenza wehluka nakwabanye besifazane.
Maningi amadoda athanda ukuba namakhosikazi angaphezu kweyodwa, nabesifazane nabo bayathanda ukuvusa imizi, babizwe ngamakhosikazi. Abantu abayeke ukuvalelana amathuba, akwehliswe imimoya kuvuswe imizi yabanumzane. Uma uganile usuthola ukuthi indoda iqonyiwe, ingabuswa wukuthi ithole iseqamgwaqo esihambe sichitha imizi. Awusazi isivumelwano sabo ukuthi sithini, awuzazi nezinhloso zabo. Asiyona neze inkinga isithembu, kuphela sidinga bonke abayingxenye yaso baswabuluke. Uma abafazi bengazwani kahle, kubalulekile ukuthi umnikazi waso (isithembu) asikhande. Ngiyafisa kwande isithembu seqiniso kunalesi esiqhutshwa namhlanje sokuba nonkosikazi oyedwa owaziwayo abanye babe abasemahontshi.